कर्णालीमा कोरोनाविरुद्धको खोप, पहिलो चरणमा ८२ प्रतिशतले लगाए – Enayanepal.com
कर्णालीमा कोरोनाविरुद्धको खोप, पहिलो चरणमा ८२ प्रतिशतले लगाए
२०७७, २६ माघ सोमबार मा प्रकाशित
सुर्खेत । पहिलो चरणको कोरोनाविरुद्धको खोप कर्णाली प्रदेशमा ८२ प्रतिशत भन्दा बढिले लगाएका छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका ८२ दशमलव ३९ प्रतिशत फ्रन्टलाईनरहरुले खोप लगाएका हुन । पहिलो चरणमा ११ हजार ७ सय ८१ जनामा लगाउने तयारी गरिए पनि ९ हजार ४ सय २० जनाले मात्र खोप लगाएका छन् ।
जसमा सबै भन्दा बढि सुर्खेतमा र सबै भन्दा कम डोल्पामा लगाइएको छ । सुर्खेतका २ हजार ३ सय ४० जनाले खोप लगाएका छन् । दैलेखका १ हजार ४ सय ८३, जुम्लाका १ हजार ४०, सल्यानका १ हजार २, रुकुम पश्चिमका ८ सय ५०, कालिकोटका ८ सय, जाजरकोटका ६ सय ७३, हुम्लाका ४ सय ८५, मुगुका ४ सय १७ र डोल्पाका ३ सय ३० जनाले खोप लगाएका छन् । यहि माघ १४ गतेबाट सुरु भएको खोप अभियान शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार कोभिशिल्ड लगाएका मध्ये १ जनामा गम्भिर खालको समस्या देखिएको थियो भने ३२ जनामा समान्य स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । हाल भने सबैको अवस्थामा सामान्य रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।
भारत सरकारबाट अनुदानमा उपलब्द भएको १० लाख डोज ‘कोभिसिल्ड’ खोप कर्णालीमा पहिलो चरणमा ११ हजार ७ सय ८१ जनामा लगाउने तयारी गरिएपनि झण्डै २ हजार कम मानिसमा खोप लगाइएको छ । पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरु, एम्बुलेन्स चालक, अस्पतालका कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका र सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका तथा मानव सेवा आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइएको छ ।
पहिलो चरणमा तोकिएका सम्पूर्ण मानिसहरुलाई खोप लगाउने तयारी गरेपनि केहि महिला सयमसेविका, स्वास्थ्यकर्मीहरु छुटेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक डा. रबिन खड्काले बताए । खोप लगाउने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर गएको, अन्य स्वास्थ्य समस्या भएको, गर्भवती जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु खोप लगाउनबाट छुटेको उनको भनाई छ । उनीहरुलाई दोस्रो चरणमा समेटिने बताइएको छ ।
पहिलो चरणको खोप सम्पन्न भए पछि कर्णाली पनि दोस्रो चरणको कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ । दोस्रो चरणको लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रबिन खड्काले बताए । ‘अहिले दोस्रो चरणमा यति जनालाई लगाउने भनेर हामीले तथ्याङ्क बनाएर केन्द्र सरकारलाई पठाउँदै छौँ,’ निमित्त निर्देशन डा. खड्काले भने, ‘पहिलो चरणको पनि केहि खोप बचेको छ । तथ्याङ्क पठाए पछि सोहि अनुसार दोस्रो चरणको खोप आउने छ ।’